Sida loo rogo ama Windows Movie Kan sameeyey Faylal ay si MP4 si fudud oo dhaqso
> Resource > Beddelaan > Sida loo rogo ama Windows Movie Kan sameeyey Faylal ay si MP4
Windows Movie Kan sameeyey oo kaliya oo noo ogolaadaa in ay dhoofiyaan files mashruuca MSWMM in wmv video files. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in aad ku guul darreysato inay geliyaan Window Movie Kan sameeyey video in YouTube, ama ma ka heli kartaa videos wmv inuu u ciyaaro aad telefoonada gacanta. Halkan qodobkan ku talin doonaa weyn Windows Movie Kan sameeyey si Converter MP4 . Waxay kaa caawin doona inaad badalo videos in MP4, qaabka video inta badan la isticmaalo, la ultrafast xawaaraha diinta iyo video tayo sare leh.
Qeybta 1: Best Windows Kan sameeyey Movie in Converter MP4 for Windows / Mac
Qeybta 2: Free Windows Kan sameeyey Movie in Converter MP4
Qeybta 3: Online Windows Kan sameeyey Movie in Converter MP4
Qeybta 1: Best Windows Kan sameeyey Movie in Converter MP4 for Windows / Mac (Yosemite ka mid ah)
• Beddelaan mashruuca Kan sameeyey Movie Windows in MP4, MKV, AVI, iyo wax kasta oo kale oo ah qaabab video.
• presets filaayo in telefoonada gacanta, PSP, Madaxweyne Siilaanyo u si fudud loo maqli karo.
• Gubashada Windows Kan sameeyey Movie video inay DVD la arrimo menu kala duwan.
• Download videos ka tiro balaadhan oo ah goobaha la wadaago video at 30X xawaaraha ugu dhaqsiyaha badan.
Sida loo badalo Windows Movie Kan sameeyey si MP4
Waxaan kuu sheegi doonaa hoose ee ku saabsan sida loo badalo Windows Movie Kan sameeyey si MP4 in Windows. Haddii aad raadinayso tilmaan ku saabsan sida loo badalo Windows Movie Kan sameeyey si MP4 ee Mac, kaliya riix halkan .
1. Kaydso files Kan sameeyey Windows Movie sida video files
Waxaad u baahan tahay si uu u badbaadiyo Windows Movie files mashruuca Kan sameeyey si wmv video files. Marka aad furto file ah mashruuca Kan sameeyey Movie Windows, waxaad kaliya riix "Save si aan computer" dhinaca bidix ee ay interface si loo badbaadiyo faylasha sida video files. Taasi waa sababta oo ah video Converter this garan karaan file video kale oo aan ahayn file mashruuc kaliya.
Fiiro gaar ah: Haddii aad ku badbaadi badan oo MSWMM files on PC, aad u baahan tahay si ay u dajiyaan in Windows Movie abuuray, ka dibna iyaga resave sida wmv video files.
2. Import video files si video Converter this
Ka dib marka aad bilowno smart video Converter, waxaad u baahan tahay riix badhanka on dhinaca kore ee bidix ee interface ka. Markaas keeno files wmv badbaadiyey in tallaabo 1 barnaamijkan. Ama waxaad si toos ah jiidi karaan iyaga oo hoos u Murayaad diinta barnaamijkan ee.
3. Dooro MP4 sida qaab wax soo saarka
Riix image qaab dhinaca midig ee interface ka, ka dibna aad arki doonaa soo saarka liiska qaab this app ee sida lagu muujiyey jaantuskan hoose. Riix tab Qaabka iyo tagaan oo ay u Video category, ee la soo dhaafay, dooran MP4 sida qaab wax soo saarka.
Fiiro gaar ah: Haddii aad loogu badalo Windows Movie Kan sameeyey in qaab MP4 for loo maqli karo qalabka qaar ka mid ah, halkaan, aad si toos ah u dooran kartaa qalabka sida qaab wax soo saarka halkii ka. Si aad u samayn, waxaad tagi kartaa qeybta Device in ay doortaan waxa aad rabto.
4. U beddelaan Windows Movie Kan sameeyey si MP4
Dhinaca geeska midig hoose ee suuqa kala ah, kaliya aad ku dhufatey "Beddelaan" badhanka si ay u bilaabaan diinta video. Tani weyn Windows Kan sameeyey Movie in MP4 video Converter kaa caawin doona inaad ka shaqeeyaan inta ka dhiman. Halka A ka dib, oo dhan hawlaha diinta video ayaa la sameyn doonaa. Ka dibna waxaad riixi kartaa fursad u Folder Open hoose ee suuqa kala si aad u hesho files MP4 la jecel yahay.
# 1. Free Video Converter: Wondershare Free Windows Kan sameeyey Movie in Converter MP4
Tani waa 100% free Windows Kan sameeyey Movie in Converter MP4. Waxaad isticmaali kartaa arjiga si lacag la'aan ah loogu badalo Windows Kan sameeyey Movie video in kasta oo qaab si AVI, MP4, MKV, MOV, iyo sidoo kale waxaad isticmaali kartaa ka filimada Macdan music.
1. Waxaad kaliya u isticmaali karaa si loogu badalo Windows Kan sameeyey Movie video si caadi ah videos, laakiin aan u bedeli karaan in videos 3D & HD.
2. No presets qalabka la heli karo si ay u isticmaalaan.
3. Waxaad ma isticmaali karaan si ay u gubaan aad Windows Movie Kan sameeyey video inay DVD.
Ma doonaysaa in aad hesho ugu fiican Windows Kan sameeyey Movie in Converter MP4 ah? Video Converter Ultimate Xaqiiqdii waa doorashadaada saxda ah.